Yakachipa Indasitiri Yakakwira Kutonhora Yakakonzera Dhizaini Fani yeFertilizer Kuomesa Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Maindasitiri Akakwira Kupisa Kunopisa Dhizaini Fani inowanzo shandiswa mukugadzira machira uye yakanyanya-kumanikidza mweya yekumanikidza. Inogona zvakare kushandiswa kutakura mweya unopisa uye magasi ayo asiri ekukuvadza, asingangoerekana aitika, asingaputi, asingachinjiki, uye asina kunamira. Mhepo inlet inosanganisirwa kudivi re fan, uye chikamu chinoenderana ne axial direction chakakombama, kuitira kuti gasi rikwanise kupinda mumhepo zvakanaka, uye kurasikirwa nemhepo kudiki. Iyo inokonzeresa dhiri fan uye pombi yekubatanidza inoenderana neiyo granular fetiraiza yakaoma.
Ndeipi iyo Yeindasitiri Yakakwira Kupisa Yakakonzerwa Dhizaini Fani inoshandiswa?
•Simba uye simba: Thermal simba chirimwa, Garbage kupisa moto chirimwa, Biomass mafuta simba chirimwa, Industrial tsvina kupisa kupora mudziyo.
•Simbi yekunyungudika: Inovhuvhuta mhepo yemaminerari poda sintering (Sintering muchina), Furnace coke kugadzirwa (Furnace coke oven).
•Gesi uye zvekuburitsa zvinhu: General mweya kuburitsa, Yakakwira-tembiricha mweya kuendesa, Inopisa gasi kuendesa, Inokanganisa gasi dhirivhari, Gasi yakavhenganiswa nekusachena kuendesa.
•Dhirivhari yemarasha upfu, Particle zvinhu / Powder zvinhu / Fragment zvinhu / Fiber zvinhu.
•Zvimwe: Pressurization uye decompression chisimbiso chemidziyo yekumaindasitiri, Kudzoreredza gasi marara gasi, Kupa mweya uye kuomesa kwechikafu uye yekugadzira mishonga mutsara
Zvimiro zveindasitiri yakakwira tembiricha yakasimudzira dhizaini fan
•Kuburitsa yakakwira gasi kumanikidza, uye nekupa yakakura mweya kuyerera vhoriyamu, pasi ruzha.
•Makasi emakona anoenda kuburikidza nekugadzirisa dhizaini, epamusoro kupfeka inodzivirira, hwakareba hupenyu hwebasa.
•Inogona kuchinjika kugadziridza vhoriyamu ye fan uye kumanikidza mukumhanya nemhepo damper. Unogona zvakare kugadzirisa kumanikidza kwe fan uye vhoriyamu nekuchinja fan fan kuburikidza neyakaenzana inowirirana frequency mota.
•Yakakwira yekufambisa kunyatsoshanda uye yakaderera fan system kurasikirwa kwesimba.
•Usazviomesera kubatanidza kuti injini mugodhi uye hutachiwana mugodhi, hapana chikonzero makakatanwa kana kuchinja bhandi, pasi Nokuraramisa basa chiutsi feni.
•Inogona kugutsa akasiyana guruva kurodha mamiriro.
•Kutakura dzimba dzekuchengetera nzvimbo yekumisikidza yekushisa uye yekudengenyeka sensors, inogona kuisa nyore ye fan inomhanya yekutarisa kifaa.
•Kusarudza magetsi ekuchengetedza mota yeChinese inotungamira mota inogadzira (kana mutengi anodikanwa), mhando yakatendeka, yakaderera simba rekushandisa.
•Kugadziridza dhizaini zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
•Kugamuchira yemhando yepamusoro kabhoni simbi yekugadzira, kana simbi isina chinhu uye zvimwe zvinhu zvesimbi zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
•Zvinhu zvakasiyana-siyana zvekusarudza kwako.
Maindasitiri Kumusoro Kwekupisa Kwakakonzera Dhizaini Firimu Ratidza
Maindasitiri Kumusoro Kwekupisa Kwakakonzera Dhizaini Fani Model Sarudzo
Kurumidza r / min
Yese kumanikidza Pa
Kuyerera m3/ h
Kuyerera m3 / h
Pashure: Hot-mhepo chitofu
Zvadaro: Dutu Rinopfumisa Guruva Muunganidzi
Nhanganyaya Ndeipi Inotakurika Nhare Bhandi Conveyor inoshandiswa? Inotakurika Nhare Bhendi Conveyor inogona kushandiswa zvakanyanya muindasitiri yemakemikari, marasha, yangu, dhipatimendi remagetsi, indasitiri yakajeka, zviyo, dhipatimendi rekufambisa etc.Iyo inokodzera kuendesa akasiyana zvigadzirwa mu granular kana hupfu. Kuwanda kwehuwandu kunofanirwa kuve 0.5 ~ 2.5t / m3. Izvo ...